News | Tag: world
विश्वकपः नयाँ युवा खेलाडीहरुका कारण ओझेलमा परे पुराना चर्चित खेलाडीहरु
काठमाडौँ । रसियामा सम्पन्न विश्वकपमा केही रोचक घटनाहरु घटे । विश्वकपका दाबेदार मानिएका देशहरुले खासै गतिलो खेल प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
सन् २०१८ को विश्वकपमा छनोट भएका ३२ देशका प्रशिक्षकको तलब कति ?
एजेन्सी । विश्वकप सुरु हुन केही दिनमात्र बाँकी रहेको छ । यसको सरगर्मी पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । विश्वकपका लागि छनोट भएका देशहरुबारे धेरै नै जान्न उत्सुक हुन्छन् ।
विश्वकप क–कसले जितेका छन् ?
के जर्मनी पेनाल्टीमा साँच्चै बलियो छ ? घरेलु मैदानको फाइदा कति हुन्छ ? अनि विश्वकपमा मेक्सिकोका कुन रक्षापङ्क्तिका खेलाडी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरेका गोलको सङ्ख्या बराबर छ ?
स्वीजरल्याण्ड र क्रोसियाको सानदार जित
एजेन्सी । विश्वकप मैत्रीपुर्ण खेलमा स्वीट्जरल्याण्डले एशियाली टोली जापानलाई २–० गोलले पराजित गरेको छ ।
विश्वकप नजिकिदै गर्दा अर्जेन्टिनालाई झट्का, यी खेलाडीले पनि चोटका कारण गुमाए विश्वकप
यसपटकको विश्वकप अर्जेन्टिनाले जित्ने हल्ला चलिरहँदा राष्ट्रिय टोलीलाई झट्का लागेको छ । विश्वकपको अन्तिम तयारीमा रहेको अर्जेन्टिनाको टिमका
चर्चित २० खेलाडीहरु जो विश्वकपमा देखिने छैनन्...
एजेन्सी । सन् २०१८ मा रसियमा हुने विश्वकपका लागि केही चर्चित देशहरु छनोट हुन सकेनन् । फ्यानहरुले केही यस्ता चर्चित खेलाडीहरुलाई विश्वकपमा देख्न नपाउने भएका छन् ।